Newsenepal:: सप्तकोशीमा के चल्दैछ ? डुंगा हो कि पानीजहाज ?
काठमाडौं । अघिल्लो महिना धनकुटाको एक सडक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै सप्तकोशीमा पानीजहाज आउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले कार्यालय नै खोलेर पानीजहाजको टिकट काटिने बताएपछि ओली हाँसोको पात्र बने ।
कुराकानी गर्दागर्दै उनले बोटलाई घुमाई हाले । यात्रु ओसार्न भ्याईनभ्याई जस्तै देखियो । सप्तकोशी यो मात्रै नभएर अन्य बोटहरु पनि सञ्चालित छन् । अझै थप आउने क्रममा समेत रहेका छन् ।
यसअघि नेकपा उदयपुरका नेता कालु लामाले सामाजिक सञ्जालमै भाडा अत्यधिक महंगो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, सुनसरी तथा उदयपुरको स्थानीय प्रशासनले भने भाडाका विषयमा ध्यान दिएको छैन । जहाज सञ्चालक पौडेल भने हाल कायम गरिएको भाडा धेरै महंगो नभएको बताउँछन् ।
प्रधानका अनुसार पूर्वसहमति लगिसकेकाले स्थलगत निरीक्षणका लाग अनुरोध गरेपछि विभागले निरीक्षण गरेर उपर्युत्तः ठहरे सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ । तर यि सबै यातायातको रुपमा भन्दा पनि पर्यटकलाई घुमाउनका लागि मात्रै विभागले अनुमति दिने उनले बताइन् । यातायात सेवाका लागि भने पर्यटन विभागले स्वीकृति प्रदान नगर्ने उनले बताइन् ।
108802/4/2019 @ 14:30